Cusbooneysiinta - Relief Aid Aid Masiibada
Tababbarka Dalxiiska ayaa Bilaabmaya Toddobaadkan!
Tababbarka "Dhisidda Dhaqdhaqaaqa Gargaarka Labada Dhinac" Safarka Tababbarka wuxuu ku soo laabanayaa wadada dayrta tababarayaasha Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid waxay booqan doonaan ku dhowaad goobaha 20 ee Galbeedka. Eeg jadwalka dhacdooyinka halkan. [...]
Caddaalada Caddaaladda u keen Cuna qabataynta Maxaabiista
Toddobaadkan, isku-duwaha caddaaladda cimilada adduunka ee San Francisco ayaa ku soo beegmi doona shaqo-joojinta qaran ee xabsiga. Marka laga soo tago Mashruuca Cilmiga Bey'ada ee Xabsiga iyo La Dagaalanka Maandooriyaha Sunta ah, Nation Gudaha ololaha #StopTheHeat wuxuu sawiray xiriir ka dhexeeya [...]
"Dhisidda Dhaqdhaqaaqa Kaalmeynta Labada Dhinac" SAACADAHA Galbeedka Galbeed Deyrtan
2018-09-03T12:43:20-04:00Sebtembar 3rd, 2018|
“Gargaarka Mutual wuxuu noqon karaa habka aan maalin walba ugu noolaano” Liistadaani waxay ka timid aqoon isweydaarsiga Houston bishii Luulyo. Dadka ku sugan gacanka khaliijka ayaa isu diyaarinaya xilli duufaano, waxaana rabnaa inaan dhiirrigelinno kuwa kale [...]
Fatahaada Wisconsin & Maxkamadda Rafcaanka ee Harvey Recovery
Kaliya maaha musiiboyinka waaweyn ee sameeya telefishanka hore ee halkaan ka jawaabeyno. Isniintii, Agoosto 20, dhulka miyiga ah ee galbeedka Madison, Wisconsin waxay la kulantay roobab rikoodh ah oo ka sarreeya 15in. Dhul gariirkii Madoobaa ee [...]
Saaxiibbada salaan! Teler halkan, oo leh casriyeyn kale oo ku saabsan iskuxirkayaga iyo dadaallada tababarka .... Waxaan fursad u helay inaan booqdo bulshooyinka ku sugan Xeebta Gacanka bishii hore. Aad iyo aad ayaan ugu mahad naqayaa Isku-xidhka California ee Allegory, [...]
Sidaas Shirarka Xagaaga badan!
Saaxiibbada salaan, Tyler halkan, oo leh waxoogaa war bixin ah oo ku saabsan waxa qaarkeen ka mid ah ay soo galaan xagaaga. Our "Dhisidda Dhaqdhaqaaqa Kaalmeynta Mutual" Safarrada Tababbarka waxay ahayd dhiirigelin noocan oo kale Gu '2018! Xitaa [...]
U Diyaargarowga Gacanka
Bishaan waxaa ka buuxa farxad iyo walwal. Mar labaad, heerkulku waa diiwaanka ugu sarreeya. Mar labaad, xilli duufaan ayaa kululaanaya. Laakiin diyaar ayaanu nahay; kululay ciribta casharkeenna cusub iyo [...]
Dhameystirka Hal Dalxiis oo Tababar ah, & Bilaabashada kan xigga!
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu shaaca ka qaadno in mashruucu-pilot-ka, Dhisidda Dhaqdhaqaaqa loogu talagalay Tababbarka Tababbarka Mutual Aid, uu ahaa guul weyn gu ’2018 - si aad u badan ayaan u nuujinaynaa inaan isu diyaarinno [...]
(Cadceed) Awooda Dadka
Bishii Mee 23, 2018, 3 maalmood kadib sannad-guuradii 8-ka ee dhulgariirkii Hurricane Maria ee ka dhacay Puerto Rico, Kooxda Gargaarka Musiibooyinka Musiibo ee #PRRebuilds Sustainability iyo Kooxda Resilience Ecolog ayaa yimid markii saddexaad ee Barrio Mariana, [...]
Soonayaasha Ku-meelgaarka ah
Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa calaamad u ahaa dhammaadka Xarunteenna Musiibada Musiibada ee Tampa Mutual Aid Disaster Relief Post-Irma kadib, Booska waxaa si deeqsinimo leh noogu deeqay Kaniisadda St Paul Lutheran. Booskaani wuxuu ahaa mid farshaxan ah, la adeegsan karo, diiran oo hal abuur leh. [...]
Dhisidda Dhaqdhaqaaqa Gargaarka Mutual - SPRING TOUR 2018
Saaxiibbada, aad ayaan ugu faraxsanahay uguna mahadnaqayaa fursadan aan ku habeeyay '' Dhisidda Dhaqdhaqaaqa Kaalmo Mutual 'Dalxiis Tababar! Tani waa daqiiqad muhiim u ah horumarinta shabakad xirfad leh oo awood leh [...]
"Waxay u ekayd sidii bambo Atomic ah oo loo tuuray" Boricua maxalli ah, sida dadka ku dhashay Puerto Rico inta badan loogu yeedho, waxay ka hadlayaan aragtida buuraha maalin ka dib markii Maria dhaaftay. "Laan walba, [...]
Muuqaalka 2017: Unafraid of Burins
2017 waxay noo ahayd sanad mashquul ah. Waxaan aragnay musiibo aan horay loo arag, labadaba cimilada la xiriirta iyo mid siyaasadeedba. Duufaanta ayaa ku sii kordheysa xoogga iyo soo noqnoqoshada, laakiin sidoo kale awoodda dhaqdhaqaaqa kala duwanaanta hoos ayaa laga [...]
Musiibada waa Kornaylku
Isaga oo kor u qaadaya irdaha galbeedka dhamaadka Aquadilla ee Dhexdhexaad / Ugu yar xabsi amniga Institución Correccional de Guerrero, aragtideena ayaa ballaarineysa qabashada dhismayaasha siligyada leh, matoor ku qeylinaya wax xun oo ka baxsan masraxa oo ka careysan [...]
Kani waa Caguas
2019-11-14T14:11:30-05:00November 25th, 2017|
Inta hartay waa Puerto Rico. Centro de Apoyo Mutuo, Xarumaha Gargaarka Mutual, waxay u jiraan sidii gacan ka taagneyd jasiiraddii duufaanta Irma ee duufaanta, Maria Puerto Rico. Wadooyinka ciriiriga ah, ee midabka leh [...]